बीपी प्रतिष्ठान र अबको नेतृत्व
१४२० पटक पढिएको
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारलाई सिनेटको सिफारिशमा प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपतिले बिहीबार पदमुक्त गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको हैसियतमा पूरा गर्नुपर्ने पदीय आचरण पूरा नगरेको, सन्तोषजनक कार्य सम्पादन नगरेको, आर्थिक अनियमितताको विवादमा मुछिएको तथा आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा उनलाई प्रतिष्ठानको सर्वोच्च संस्था सिनेट (सञ्चालक परिषद् बैठक)ले बर्खास्त गर्न गत फागुन १७ गते प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिश गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले सिनेट बैठकबाट गएको सिफारिशलाई सदर गर्न झण्डै २ हप्ता लाग्यो । यो २ हप्ताको समय प्रतिष्ठानमा अनेक चलखेल भए । हालका रेक्टर गुरु खनाल (उनी बिहीबार साँझदेखि कार्यवाहक उपकुलपति भएका छन्) ले आफू कार्यवाहक उपकुलपति भएको भन्दै उपकुलपति राजकुमार रौनियारलाई कार्यालय पस्न नदिने प्रयास गरे । रेक्टर खनाल र रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठले उपकुलपतिको कार्यकक्षमा ताला लगाउनेदेखि गाडी खोस्नेसम्मको प्रयास गरेका थिए ।
उपकुलपति रौनियारले पनि आफूलाई बर्खास्त गर्न गरिएको सिफारिश प्रधानमन्त्रीले सदर नगरेको र आफू पदमुक्त भएको पत्र प्राप्त नभएकाले आफू नै प्रतिष्ठानको उपकुलपति (भीसी) भएको भन्दै कार्यकक्ष खोलेर बसेका थिए । तर बिहीबार प्रधानमन्त्रीले सिनेटको सिफारिश सदर गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा र नयाँ भीसी
अब प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी पद उपकुलपतिको पद रिक्त छ । आशा छ प्रतिष्ठानले चाडै नै कुशल नेतृत्व गर्ने र प्रतिष्ठानको गिरेको साख जोगाउने उपकुलपति पाउने छ । रेक्टर खनाललाई बिहीबार साँझ कार्यवाहक उपकुलपति तोकिएको छ ।
हालको अबस्थामा प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा गिर्दो छ, लाजमर्दो छ । प्रमाणित हुन नसकेको तर ‘ओपन सेके्रट’को रूपमा सबैले बुझेको कुरा के हो भने प्रतिष्ठानमा आउने उपकुलपति, रजिष्टार, रेक्टर र अस्पताल निर्देशक पावर सेन्टरमा पैसा बुझाएर आउने गरेका छन् । यो विषय लिने र दिनेलाई बाहेक अरुले लख काट्ने हो ।
पूर्व उपकुलपति बीपी दास र राजकुमार रौनियारले करोडौ रुपैयाँ बुझाएर उपकुलपति भएको हल्ला चले । यदि त्यस्तो नै हो भने प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले प्रतिष्ठानमा कहाँ र कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न मात्र देखिन्छ । पूर्व उपकुलपतिद्वयमा त्यही देखियो । पूर्व उपकुलपति दासमाथि धेरै मुद्दा अख्तियारमा छानबिनको क्रममा छन् । राजकुमार रौनियारका विरुद्धमा पनि उजुरी परेका छन् तर अख्तियारबाट छानबिन टुङ्गिएको छैन ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमात्र होइन यहाँका कर्मचारी पनि कार्यालयको कामभन्दा राजनीतिमा बढी संलग्न छन् । कार्यालयबाट आउने तलब भन्दा बढी उनीहरू प्रतिष्ठानका विभिन्न स्रोतबाट कमाउँछन् अर्थात् अनियमिततामा संलग्न भएका छन् । केही कर्मचारीहरू निरन्तर काममा खटिने र केही पहँुचवाला कर्मचारीहरू राजनीति गर्ने र कमाउधन्दामा लाग्ने गरेकै कारण आज प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा गुम्न थालेको छ ।
प्रतिष्ठानका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विस्तार, अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमको विकास, शैक्षिक पूर्वाधार तथा अस्पतालका सेवाहरू निकै अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेका छन् । आफूखुशी नियुक्त गरिएका कर्मचारी, प्रतिष्ठानको खरीद र ठेक्कामा हुने कमिसनले प्रतिष्ठानलाई झन् कमजोर बनाएको छ । प्रतिष्ठानलाई कमाइखाने भाँडोको रूपमा यहाँका केही राजनीतिक दल, समाजसेवी कहलिनेहरू र केही पत्रकारहरूले पनि प्रयोग गरेको तथ्य लुकेर लुक्दैन ।
२ मिनेटमा आउने एक्सरेको रिपोर्ट लिन आज प्रतिष्ठानमा १ दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ५ मिनेटमा सकिने भिडियो एक्सरे गर्न एक महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ, अप्रेसनका लागि महङ्गो रकम खर्च गर्दा तत्काल हुने तर रुटिङ अप्रेसन गर्न महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सबै बिरामीले विशेषज्ञ सेवा पाउन सकेका छैनन्, बिरामीको चापअनुसार अस्पतालको क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन । प्रतिष्ठानमा भएका विज्ञ र सिनियर डाक्टरहरू प्रतिष्ठानको फोहोरी राजनीतिबाट दिक्क भएर अन्यत्र जाने मनस्थितिमा छन् ।
यहाँ कार्यक्षमता, योग्यता र योगदान भन्दा पनि चाकडी र राजनीतिक पावरका आधारमा जिम्मेवारी पाउने र अवसर पाउने हुनाले प्रतिष्ठानमा राम्रा मान्छे भन्दा पनि हाम्रा मान्छेको बहुल्यता छ । राजनीतिक दलका केही नेताहरू प्रतिष्ठानलाई शक्ति देखाउने ठाउँको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । नेताले नीति र थिति बसाउने हो बेथिति सिकाउने र शुरुवात गर्ने होइन । र अब आउने उपकुलपतिले यस्ता तमाम विषयलाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठानको गुमेको प्रतिष्ठालाई जगाउनुपर्ने हुन्छ ।
धरानवासी मौन बस्नु हँुदैन
बीपी प्र्रतिष्ठान देशकै गौरवपूर्ण सम्पत्ति हो भने धरानवासीहरूका लागि सम्पत्ति र जीवन पनि हो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कसरी धरानमा स्थापना भयो ? भन्ने कुराको धरानवासीले खोजी गर्नु आवश्यक छ ।
यदि प्रतिष्ठान नहुने हो भने धरानको अवस्था के हुन्छ भनेर यहाँका बासिन्दा, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले गहिरिएर सोच्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मोरङको डाइनियामा शिलान्यास गरेको प्रतिष्ठान धरानमा कसरी निर्माण भयो भन्ने इतिहास खोज्नु जरुरी छ । त्यसबेला धरानमा प्रतिष्ठान बनाउन त्यसबेला आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरू अहिले पनि उपलब्ध छन् । पूर्वको लोकप्रिय पत्रिका ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकको जन्म नै बीपी प्रतिष्ठान धरान ल्याउने आन्दोलनबाट भएको हो ।
त्यसबेला इन्डिपेन्डेन्ट युथ अर्गनाइजेसन सहित विभिन्न समूहहरूले गरेको चर्को आन्दोलनको उपलब्धी हो बीपी प्रतिष्ठान । यदि आज बीपी प्रतिष्ठान नहुँदो हो त धरानले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन थालिसकेको हुन्थ्यो । आज देश विदेशका मान्छेहरू पढ्न, उपचार गर्न, रिसर्च गर्न धरान आउने गरेका छन् । सिङ्गो धरानको आधा अर्थतन्त्र प्रतिष्ठानले नै धानेको छ भन्द पनि फरक नपर्ला । तर पछिल्लो समय धरानले प्रतिष्ठानप्रति गाम्भीर्यता नदेखाएको भान हुन थालेको छ । नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको मौनताले प्रतिष्ठान धरानको इतिहास, गौरव र सम्पत्ति हो भन्ने कुरा नबुझेको पो हो कि भन्ने भान हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ ।
धरानवासीले एउटा स्वतन्त्र समूह बनाएर प्रतिष्ठानका बेथिति सुधार गर्ने, सुविधा बिस्तार गर्नेजस्ता कार्यमा रचनात्मक भूमिका खेल्नै पर्छ । होइन भने प्रतिष्ठान एक दिन टाट पल्टिएर बन्द हुन सक्छ या अन्यत्र जान पनि सक्छ । यस तर्फ सचेत हुनै पर्छ । आज प्रतिष्ठानमा राम्रा भन्दा पनि हाम्रा मान्छेको पहुँच छ । ३ दिन लगाएर प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न आएको बिरामीले ७ दिनमा डाक्टरसँग भेट्न र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने अवस्था छ ।
प्रतिष्ठानका हरेकजसो विभागमा नियमले हैन नियतले काम भएको हुन्छ । प्रतिष्ठान स्थापनाको यतिका वर्षमा धरानले अपनत्व कसरी पायो त ? यो सबैले सोच्ने विषय हो । राजनीतिक दलले प्रतिष्ठान धरानको गहना हो भन्ने मात्र होयन गहनाको सुरक्षा गर्न पनि जान्नु पर्दछ । ४१ औँ सिनेट बैठकमा धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख मञ्जु भण्डारीले प्रस्तुत गरेका योजनाहरूलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । धरानवासीले प्रतिष्ठानको रक्षकको भूमिका खेल्नुपर्छ ।
प्रतिष्ठानका बिषयमा लेखिएका र लेखिनुपर्ने विषयहरू धरै नै छन् । खोज्नुपर्ने विषयहरू धेरै नै छन् । प्रतिष्ठानमा यसअघिका पदाधिकारी, कर्मचारी वा जो कसैले गरेका अनियमित कार्यको छानबिन हुनैपर्छ, गरेको गल्ती अनुसारको सजाय पाउनै पर्छ ।
अब प्रतिष्ठानमा राजनीति बन्द हुनुपर्छ । नितान्त शैक्षिक र सेवाको भावले हेरिनु पर्छ । धरानवासीले ‘हाम्रो प्रतिष्ठान, राम्रो प्रतिष्ठान’ बनाउने अभियान चलाउनु पर्छ । यहाँको भ्रष्टाचार र बेथितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारलाई सक्षम र इमानदार पदाधिकारी नियुक्त गर्न दाबाब दिनु पर्छ ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले योजना, दक्षता र अनुभवका आधारमा उपकुलपतिहरू नियुक्ति गर्ने अभियान चलाएका थिए । तर, उनी आफँैले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । अब उनैले शुरु गरेको योजना, दक्षता र अनुभवका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति हुनुपर्छ त्यसकै लागि सरकारलाई अनुरोध गरौँ ।